जसको कोरोनाले होइन, लकडा`उनले लियो ज्या`न : दोषी को ? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/जसको कोरोनाले होइन, लकडा`उनले लियो ज्या`न : दोषी को ?
विश्वब्यापीरुपमा महा मा`री बनेको कोरोनाभाइरस अर्थात् कोभिड–१९ बाट आफ्नो नागरिकको ज्यानको सुर`क्षा गर्नका लागि सरकारले देशभर लकडाउन लागू गरेको छ । तर, लकडाउन कै कारण एक नागरिकले यतिबेला ज्या`न गुमाउनु परेको छ । ज्वाला`मुखी गाउँपालिका–५, बाँझाघरको होमब`हादुर राना मगर आफ्नो परिवारसँगै चितवनको माधव`पुरमा बस्थे ।
मि`स्त्री काम गर्ने उनको आम्दानी पनि ठीकै थियो ।तर कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी देशैभर लकडाउनको घोषणा ग¥यो । त्यसलगत्तै होम बहादुरले आफ्नी पत्नी, दुई छोरी र छोरालाई गाउँ पठाए ।चितवनमा भन्दा गाउँमा सुरक्षित भइने भन्दै उनले परिवारका सबै सदस्यलाई गाउँ पठाएका थिए । लकडाउन केही दिनमै खुल्ने आशमा उनले परिवारलाई गाउँ पठाएर आफू भने शहरमै मजदु`री गर्ने उनको सोच थियो । तर सुरुमा एक साताका लागि गरिएको भनिएको लक`डाउन दुई पटक थपियो । चैत १७ मा थपेर २४ गतेसम्म र त्यसपछि पनि वैशाख ३ गतेसम्म बनाइयो ।
लकडाउन खुल्ला भन्दा झन् झन् बढ्दै गएपछि उनी चितवनबाटै हिँडेर बेनीघाट हुँदै आफ्नो गाउँतर्फ लागे । बेनीघाटबाट करिब ४ घण्टा हिँडेर उनी वैशाख ३ गते बुधबार राति करिब ९ बजे बुङ्कोटघाट पुगे । परिवारका सदस्यले पनि गाउँमा लकडाउन कडा पारिएकाले राति आउन भनेका थिए । जसकारण होमबहादुर रातिको समय पारेर आफ्नो गाउँ धादिङ जान चाहन्थे ।होमबहादुर राति ९ बजेसम्म आफ्ना परिवारका सदस्यसँग फोनमा कुराकानी गरिरहेका थिए । आफू बुङ्कोट घाट पुल आइपुगेको भन्दै उनले परिवारका सदस्यसँग कुराकानी गरिरहेका थिए । आफूलाई लिन आउन भन्दै उनले परिवारका सदस्यलाई बुङको टघाटको पुलको पारिपट्टी बोलाएका पनि थिए ।
तर रातको ९ बजेपछि एकाएक होमबहादुरको मोबाइलको स्वीच अफ भयो । लामो समय कुर्दा पनि होमबहादुर सम्पर्कमा आएनन् । परिवारका सदस्यलाई लाग्यो कि होमबहादुर कोही साथीभाइको घरमा गए होलान् वा गोरखाका स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा पो राखिदिए कि भन्ने लाग्यो । वैशाख ३ गते होमबहादुर नआएपछि परिवारका सदस्य पनि घर फर्किए । वैशाख ४ गते बिहानै होमबहादुरलाई खोज्न परिवारका सदस्यहरु फेरि बुङ्कोटघाटतर्फ लागे । तर परिवारको सदस्यले होमब`हादुरलाई जीवित पाउन सकेनन् ।
गोरखा र धादिङ जोड्ने बुङ्को`टघाटको पक्की पुलको तल होमबहादुरको शव भेटियो ।कोरोना भाइरसको माहा`मा`रीको कारण गोरखा र धादिङका स्थानीयले पुलको दुबैतर्फ बार लगाएका थिए । गोरखा तथा धादिङतर्फ मान्छे`समेत आवतजावत गर्न नमिल्ने गरी फलामको डण्डीमा जस्ता बारेर बन्द गरिएको थियो । यद्यपि होम बहादुर ती बारलाई छिचोल्दै गोरखातर्फको पुल पार गरेर धादिङतर्फ पुगिसकेका थिए । पुलको छेउमा रहेको फलामको रेलिङबाट हिँड्दै उनी पुल पार गर्दै थिए ।
तर धादिङतर्फको बारसमेत पार गरिसकेपछि होमबहादुर रेलिङबाट बाटोमा झर्न लाग्दा त्यहीँ चिप्लिएको अनुमान गरिएको छ । रातको समयमा स्थानीयले देख्ला`न् कि भनेर सम्भवत उनी बत्तीसमेत नबाली आएको हुनसक्छ । जसको कारण अँ`ध्यारोमा बाटो नदेखेर उनी पुलको मुख्य पिल्लरको छेउबाटै तल नदी किनारमा खसे र टाउको ठोक्किएर उनको मृ`त्यु भयो ।
कोरोना भाइरस संक्र`मणको खतरा बढेको भन्दै वैशाख महिना लागेपछि धादिङ र गोरखामा लकडाउन कडा पारिएको थियो । र्यापिड टेष्टका क्रममा धादिङ मैदीका एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको भन्दै त्यसपछि बाहिरबाट आउनेलाई प्रवेश निषेधजस्तै गरिएको थियो । मुख्य`तः भारतबाट आउनेहरुलाई त्यहाँ कडा निगरानीमा राखिएको थियो र उनीहरुलाई क्वारे`न्टाइनमा बस्न बाध्य पारिएको थियो । हो`मबहादुर क्वारेन्टाइन छल्नका लागि नै रातारात घर आएको हुनसक्ने ज्वालामुखी गाउँपालिका–५, धादिङका वडाध्यक्ष कृष्णप्र`साद काप्रीको भनाइ छ । रातको समयमा उनी एक्लै गाउँ आउँदा दुर्घटना भएको का`प्रीले बताए ।